Faafaahin Qaraxyadii ka dhacay Muqdisho - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Faafaahin Qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
Faafaahin Qaraxyadii ka dhacay Muqdisho
February 23, 2018 February 24, 2018 admin651
Magaalada Muqdisho ayaa caawa waxaa ka dhacay laba Qarax oo loo adeegsaday baabuur iyo weerar dagaal.
Qaraxa ugu khasaaraha badnaa ayaa ka dhacay goob gawaarida la dhigto Hotelka cusub ee Doorbin Ex Baar Fiat, waxaa qaraxaas ku nafwaayey askar iyo shacab wadada marayey, dadku dhibaatadu kasoo gaartay Qaraxaan ayaa waxaa ka mid ah darawalada iyo ilaalada Senator Yuusuf Geelle Ugaas iyo Senator Cabdi Dhuxulow Dhagdheer.
Weerarka kale ayaa ka dhacay Taalada Dhagaxtuur, gaari ay la socdeen 4 Shabaab oo watay dharka cusub ee ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa toogtay askari ilaalo ka ahaa kontoroolka Sayidka, iyagoo u gudbay dhanka Madaxtooyada, waxaana kadib rasaaseeyey ciidamada ilaalada Madaxtooyada qeybta albaabka Syl, 3 kamid ah Shabaabka ayaa ka dagay gaariga iyagoo dagaal la galay ilaalada Madaxtooyada halkaas oo ay ku dhintay, waxaana sidoo kale halkaas ku qarxay gaarigii ay wateen.
Ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray weerarka waxaana lagu dilay 3 Shabaabka, halka 2 kale isqarxiyeen. Dhanka kale tirada qasaaraha Shacabka iyo Ciidanka ayaa gaaraysa ilaa 18 dhimasho iyo dhaawac 21 kale.
Weerarka ayaa kusoo aadaya kadib 24 saac oo wasiirka amniga DFS sheegay in gawaari qarax sida ay ku jiraan Magaalada Muqdisho. Arinta isweydiinta mudan ayaa ah halka ay Alshabaab ka keeneen dareyska cusub ee ciidanka Booliska Soomaaliyeed, halkii ay horey u isticmaali jireen tuutaha Militariga.
Marco Asensio Oo Seegi Doona Kulanka Alaves
Weriyihii VOAda ee Muqdisho oo Geeriyooday
Al-shabaab ma weeraradii saldhigyada gudaha soomaaliya bay u badaleen kenya?
January 11, 2020 Duceysane
Mayor-ka Cadaado oo ka qeybgalay shirka Caasimadaha (Sawirro)
Galmudug Waxay u baahan tahay…